I-Team of Choice ayinankinga ngokuhlukana noXulu
USIYANDA Xulu weMaritzburg United kubhekwe ukuthi uzosayina kuliphi iqembu njengoba kuphela inkontileka yakhe neTeam of Choice
MINENHLE MKHIZE | June 2, 2020
I-MARITZBURG United isikulungele ukuhlukana nomdlali wasemuva uSiyanda Xulu uma ethola okungcono kwenye indawo.
UXulu usenyangeni yokugcina enkontilekeni yakhe neTeam of Choice futhi akakayisayini entsha kodwa usekhona umthetho weFifa othi abadlali bazohlala ezinkontilekeni zabo kuze kuqedelwe isizini ka-2019/2020, uma iqedeleka.
Ngesikhathi ekhuluma ne-Independent Media, uFarook Kadodia, ongusihlalo weTeam of Choice uveze ukuthi bakulungele ukulahlekelwa yilo mdlali.
“Kumele ngikucacise ukuthi besingathanda ukuba noSiyanda kwiMaritzburg. Kodwa ngeke ngime endleleni yakhe ethinta imali nekusasa lakhe,” kuchaza uKadodia.
"Yilokho esakhuluma ngakho nomdlali phambilini sathi uma engakutholi akufunayo ngokwemali, iMaritzburg izohlale ikhona ukuthi ibe naye. USiyanda uyabiza kodwa lapha kwiMaritzburg asinayo ibhajethi yeMamelodi Sundowns neKaizer Chiefs, noma i-Orlando Pirates."
UXulu uzohlanganisa iminyaka ewu-29 kungekudala. Imenenja yakhe uPaul Mitchell weSiyavuma Sports Agancy, usanda kuveza ukuthi isivumelwano esilandelayo azosenza uXulu, sibaluleke kakhulu njengoba esehlelela ikusasa lakhe ngemuva kwebhola.
“Iqiniso lithi uma uSiyanda engakutholi okumfanele, sizobe sikhona. Ngisibonile isitatimende esikhishwe yi-agent yakhe uPaul Mitchell, ethi uneminyaka ewu-29 ngakho inkontileka yakhe yokugcina kumele ibe yinhle ngokwemali,” kuqhuba uKadodia.
Ngeke sime endleleni kaSiyanda kodwa futhi ngeke sikufihle ukuthi singathanda ukuba naye eMaritzburg."
UXulu useke wamataniswa nePirates kodwa uMitchell uthi ayikho inkontileka yesibambiso asebeyisayinile.
“USiyanda ubheke into engcono kakhulu kunalokhu akuthola kwiMaritzburg. Kodwa akumele singene sigamanxe empilweni kaSiyanda. Useke waya eRussia. Ubehola imali enhle,” kucacisa uKadodia.
"Ubuyele eNingizimu Afrika waya kwiKaizer Chiefs, wahola imali enhle. USiyanda ufike kwiMaritzburg wahola le mali ayiholayo."
Lesi sitobha sijoyine iTeam of Choice kumasizini amathathu edlule sisuka kuMakhosi. UXulu wazakhela igama eyibamba kwiSundowns ngo-2009 ngaphambi kokuya kwiFC Rostov yaseRussia.
“Sihlale sikuqonda ukuthi ubehola imali engcono ngakho ngeke sime endleleni yakhe,” kusho uKadodia.